WordPress: kinova 5.2 vaovao sy zavatra maro hafa momba ny WP | Avy amin'ny Linux
WordPress: Endri-javatra, fametrahana, fanamboarana ary firafitra
Tamin'ny lahatsoratray teo aloha momba ny WordPress (WP), Rafitra fitantanana atiny na CMS (mifototra amin'ny lozisialy maimaim-poana sy loharano misokatra), antsoina hoe «WordPress: Inona no atao hoe CMS? Fitaovana sy endri-javatra» Izahay dia mijery lalina ny atao hoe CMS, ary manazava ny atao hoe WP.
ankehitriny Amin'ity famoahana ity dia hanome hevitra momba ny kinovan'ny WP (Gutenberg) ankehitriny sy ny kinova vaovao navoakany (5.2) izahay, ny mampiavaka azy amin'ny ankapobeny sy ny firafiny, (ny asany, ny safidiny ary ny modules) ary ireo dingana fototra ilaina amin'ny fametrahana azy sy ny fanamboarana azy.
2 WordPress: kinova ankehitriny
2.1 Inona ny WordPress?
2.2 Gutenberg: kinova ankehitriny
2.3 Tombontsoa amin'ny fanavaozana ny WP
2.4 Rafitra tena izy
2.4.1 Fifanarahana vaovao
2.4.2 Interface nentim-paharazana (Admin Admin)
2.5 Fametrahana sy fikirakirana
2.6 Solon'ny WordPress
Ity lahatsoratra ity dia tsy torolàlana malalaka sy lalina amin'ny tsirairay amin'ireo fiasa, safidy ary modules misy ao amin'ny CMS izay WP ankehitriny. Fa ny mifanohitra amin'izay dia antenaina fa ho mpitari-dalana tsotra nefa feno sy mahasoa amin'ny WP, izay hanampy antsika hahafantatra sy hahatakatra tsara ny fampiasana ireo endri-javatra isan-karazany ao anatiny, hahafahana mampiasa sy mitazona ity fitaovana ity havaozina.
Ny hevitra dia ity fanontana ity dia fanombohana kely nefa voalamina tsara na famenony ireo lahatsoratra taloha sy ho avy amin'ny Blog FromLinux momba ny WP, mifototra araka izay azo atao amin'ireo antontan-taratasy ofisialy misy azy. Satria i WP dia misy Community Community tena tsara, amin'ny fiteny maro, fa indrindra amin'ny Espaniola. Izay manana katalaogin'ny fampahalalana mandroso sy fahalalana bebe kokoa, ary misy indrindra ao WP amin'ny teny espaniola.
Araka izany, manantena izahay fa ity dia torolàlana fohy na mahomby ary mahomby mba hanampiana ireo mpampiasa WP ankehitriny sy vaovao ary ho avy amin'ny fahalalana sy ny fampiasana an'io fitaovana io.
WordPress: kinova ankehitriny
Inona ny WordPress?
WP dia lozisialy namboarina tamin'ny fanasongadinana ny fahazoana miditra, ny fahombiazana, ny fiarovana ary ny fampiasana mora, izay nahatonga azy ho CMS malaza indrindra ankehitriny. Ary amin'ny lahatsoratra farany dia faritanay fohifohy toy izao manaraka izao:
WP dia CMS matanjaka izay maimaim-poana alefa sy ampiasaina., fa izy koa dia serivisy fampielezana tranonkala fampiantranoana fampiantranoana fampiantranoana maimaim-poana sy be karama fantatra amin'ny anarana hoe "WordPress.com" izay mandray fanavaozana matetika be. Izy io koa dia manana sehatra rahavavy iray hafa fantatra amin'ny anarana hoe "WordPress.org" Azo alaina amin'ny teny espaniola ihany koa. Ary manana atiny fampahalalana sy teknika goavambe.
Ary nasongadinay fa ny WP amin'izao fotoana izao dia miasa amin'ny alàlan'ireto teknolojia manaraka ireto:
Ankehitriny WP dia mampiasa ny fiteny PHP, y MySQL amin'ny maha-Database Manager (DB) ary Apache fanompoana ambany Fahazoan-dàlana GPL. Noho izany, hoy ny fampiharana na SW fitaovana mifanaraka amin'ny toetran'ny Open Source (CA) ampiasaina ao amin'ny Rindrambaiko maimaim-poana (SL).
Raha fintinina, azo lazaina tsara fa CMS mahafinaritra izy io amin'ny famoronana tranokala sy bilaogy.Iray amin'ireo tombony lehibe na tombony lehibe indrindra amin'ny fananany fampahalalana marobe misy sy havaozina hahafantatra sy hitantana azy.
Ary izany dia manana endrika tsara sy fizotran'ny fampandrosoana mahomby izay miandraikitra ny "Global Community" mahomby izay manampy amin'ny fotoanany, ny fahalalany ary ny fahaizany. hahatonga an'i WP ho vokatra navaozina sy azo antoka. Ho fanampin'ny mpamorona, mpamorona ary bilaogera an'arivony izay mizara ny fahalalany ny WP amin'ny alàlan'ny lahatsoratra bilaogy, tutorial, hevitra, horonan-tsary ary famoronana lohahevitra sy plugins an'arivony.
Gutenberg: kinova ankehitriny
Ny kinova WP voalohany navoaka dia 0.7, ny 27 Mey 2003, hatramin'ny 5.0 Gutenberg ankehitriny. Mazava izany fa ny WP dia rafitra matotra sy matanjaka ankehitriny, miaraka amina vondrom-piarahamonina matanjaka sy mivoatra hatrany. Evolisiona izay naseho tamin'ny famoahana ny kinova kandidà manaraka 2 (RC2) ho an'ny WordPress 5.2, izay ho hita manomboka ny talata 7 may 2019.
Ity kinova 5.2 an'ny WP vaovao ity dia mampanantena hanome fitaovana matanjaka kokoa hamantarana sy hanamboarana ireo olan'ny fikirakirana ary lesoka mahafaty. Zava-dehibe ho an'ireo Developers manampy ny mpanjifany na mitantana tranokala izy io, satria manamora ny fahazoan'izy ireo vaovao tsara rehefa mila izany izy ireo.
Izy io koa dia hampiditra endri-javatra vaovao ao amin'ny fiarovana ny tranokala sy ny fitaovam-piarovana PHP Error., izay hanome fiadanan-tsaina bebe kokoa rehefa misy olana amin'ny plugins na lohahevitra ao amin'ny tranokala mitantana. Izy io koa dia ahitana sary masina vaovao hita eo amin'ny solaoro misy anao, ary fiheverana momba ny fahazoana miditra vaovao ho an'izay mampiasa teknolojia mpanampy, sns.
Hatramin'ny andiany 5.0, WP dia mampiasa ny tonian-dahatsoratra hita vaovao antsoina hoe "Gutenberg" izay mikendry ny hanavao ny fomba famoahana ny atiny amin'ny alàlan'ny WordPress, amin'izay ny olona rehetra, anisan'izany ireo izay manana fahaizana teknika kely, dia tsy afaka mamoaka fotsiny fa manangana tranokala sy bilaogy mora foana, tsy mila mividy sy mampiasa lohahevitra na plugins an'ny antoko fahatelo.
Tombontsoa amin'ny fanavaozana ny WP
Ny fanavaozana vaovao tsirairay matetika dia mitondra ireto tombony manaraka ireto, toy ny: fanatsarana, fanovana, fanatsarana, fanampiny na fanafoanana ireo fiasa na toetra mampiavaka azy. Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia azo zaraina amin'ireto manaraka ireto:
Fanatsarana ny haavon'ny kaody sy ny fampiasa
Fanatsarana ny haavon'ny endrika ao amin'ny tontonana admin
Fanatsarana (hafainganana sy hafainganana) ny kaody
Vahaolana ho an'ny lesoka (bibikely) hita
Fiovana eo amin'ny sehatry ny tonian-dahatsoratra
Fanatsarana ny haavo haino aman-jery multimedia
Fanatsarana customizer ho an'ny lohahevitra
Fanatsarana ny fampiharana ankapobeny
Ireto sy ireo tombony kely hafa dia zava-dehibe ny fanavaozana ny WordPress amin'ny kinova farany, faran'izay haingana, mba ho vonona hatrany sy hampifanaraka amin'ny maoderina teknolojia miova.
WP amin'izao fotoana izao dia manana ny rafitr'asa fitantanana manaraka miaraka amin'ny safidiny na ny fiasa mifanaraka aminy:
Interface nentim-paharazana (Admin Admin)
Tantano ny fividianana
Mandika lahatsoratra iray
Ireo mpampiasa rehetra
Fiovan'ny tapakila amin'ny mailaka
Hidio ny Menu
Aorian'izany amin'ny lahatsoratra iray hafa momba ny WP dia hizaha ny tsirairay amin'ireo fizarana, modules, options ary functionalities ireo isika.
Raha nanazava tamin'ny lahatsoratray momba ny WP teo aloha izahay, efa ao amin'ny Blog FromLinux misy lahatsoratra izay mampianatra anay ny fomba fametrahana sy fikirakirana ny WP, ka tsy hamerina ny atiny voalaza fa hanome izahay fampahalalana ofisialy an'ny WordPress amin'ny teny espaniola momba ny fametrahana sy fanamafisana WP. Ho fanampin'ny fampifandraisana ny fampahalalana ofisialin'ny WordPress Codex ho an'ny fametrahana WP Multisite. Mba hamenoana ireo fidirana ireo izay lasa lany andro.
Misy safidy maro hafa amin'ny WP eny an-tsena ankehitriny. Ny sasany tsara kokoa ary ny sasany tsy dia be loatra. Anisan'izy ireo no azontsika lazaina:
Aorian'izay, amin'ny lahatsoratra iray hafa ao amin'ny "Ireo tranonkala tsara indrindra hananganana bilaogy an-tserasera" dia hitrandrahana ireo sy ireo safidy hafa misy izahay.
Raha fintinina dia afaka miteny isika fa WP dia CMS tena tsara, satria mamela hitantana mora foana ny atiny sy ny fisehon'ny tranonkala iray tsy misy fahalalana lehibe momba ny fandaharana. Izay nitarika azy hanana toerana mendrika eo amin'ireo be mpampiasa eran-tany.
Ho fanampin'izany, ny fisian'ny «GPL» fahazoan-dàlana azy dia mamela antsika hampiasa azy io fa tsy mila mandoa izany., tsy toy ny CMS maro hafa manana kalitao na hery kely. Ny fampiasana azy eo an-toerana (amin'ny mpizara antsika manokana) na amin'ny Internet, miaraka amin'ny fonenantsika manokana, dia zavatra iray izay manamarika ny fahasamihafana lehibe amin'ny fanajana ny hafa.
Ary ny habetsahan'ny Plugins, Themes ary fanampiny hafa (amin'ny alàlan'ny fananganana programa vaovao), izay mahatonga ny WP ho vokatra miavaka ary extensible tanteraka, izay mitombo isan'andro ihany koa amin'ny lala-mahitsy.
Ary interface vaovao, hatramin'ny namoahana ny kinova 5.0, izay manamora kokoa ny famoronana sy fitantanana ny atiny momba azy. Fanampin'izany vondrom-piarahamonina goavambe sy goavambe, izay manamora kokoa ho anay ny mahita vahaolana amin'ny tsy fahombiazantsika na lesoka momba ny WP, na lahatsoratra sy torohevitra ary lahatsoratra fanampiana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » WordPress: kinova 5.2 vaovao ary bebe kokoa momba ny WP
Navoakan'i Microsoft ny mpamorona Q # sy simulator